China Portabel Alluvial Placer Gold Washing Plant Trommel Sluice Box ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Rigo
Portabel Alluvial Placer Gold Saa Osisi Trommel Sluice Igbe
Osisi Gold Trommel na-asa ahụ dị mfe ịkwaga ma wụnye, ikike ya nwere ike iru 300 ton / awa. A na-ejikarị ya iji weghachite ihe edo edo ma ọ bụ ihe ndozi ọla edo na aja ojii.Ọ na-erepịa mmiri na ike eletrik na-enweghị kemịkal metụtara, ya mere enweghị mmetọ ọ bụla maka gburugburu gburugburu.
Enwere ike ịhazigharị ya site na ihe ndị ahịa chọrọ chọrọ, enwere ike itinye igwe na akụrụngwa ndị ọzọ ngwa ngwa na osisi iji bulie ọnụego mgbake ma nweta arụmọrụ dị elu. Dị ka tebụl na-ama jijiji, igbe mkpọtụ na wdg.
Osisi a na-asacha ọla edo bụ osisi zuru ezu nke gụnyere hopper nri, ihuenyo trommel na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ ihuenyo vibrating (dabere na apịtị dị na ájá), mgbapụta mmiri na mmiri na-agba mmiri, ihe ntanetị ọla edo, ịgbanye igbe na-eme mkpọtụ na igbe a na-atụgharị. , na gbọmgbọm nke amalgamator na ọla oku na-agbaze ọla edo.
Dabere na ihe ị chọrọ, anyị nwere ike ịmepụta ma wuo osisi iji chọpụta mineral gị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ enyemaka n’inweta ntọala osisi gị na saịtị ma rụọ ọrụ, anyị na-enye ọrụ ndị ahụ dabere na ọtụtụ iri afọ nke igwupụta anyị na-aga nke ọma.
Uru nke Ngwongwo Trommel Gold
1.Ọ bụ nhọrọ dị ukwuu nke akụ na ụba dabara adaba maka obere obere nhazi nke ihe.
2.Ihuenyo ahụ nwere ihe nzacha dị iche iche maka ọrụ dị iche iche dị egwu nke na-eme ka nkewa nke ihe dị mma.
3.The imewe nwere ọgwụgwụ ọrụ mgbanwe na-enye ohere maka ihuenyo dochie anya ntupu nha
4.Multiple n'ígwé nke ihuenyo aka sifting usoro.
5.Ọ na-agbanwe agbanwe efere ihuenyo ka akụkụ ndị nwere ike dochie anya.
6. Ihuenyo Trommel nwere arụmọrụ dị elu na nnukwu ikike maka ọtụtụ mpịakọta nke ihe
7. Ihuenyo na-iche iji kwado ikike dị elu karị, nye ndụ ogologo ihuenyo ma zere ihe na-ekpuchi ihe.
Nkọwapụta nke ọla mwepu ọla edo maka ịsa igwe ọlaedo SEPARATOR igwe
.Dị NJ 20 NJ50 MGT100 MGT200
Nha / mm 6000x1600x2499 7000 * 2000 * 3000 8300 * 2400 * 4700 9800 * 3000 * 5175
Ike 20-40 50-80 tph 100-150 tph 200-300 tph
Ike 20 30 kw 50 kw 80 kw
Trommel Ihuenyo / mm 1000x2000 φ1200 * 3000 φ1500 * 3500 φ1800 * 4000
Igbe Sluice 2 set Ntọala 2 Ntọala 3 Ntọala 4
Nweta mmiri / m³ 80m³ 120 m³ 240 m 370 m³
Iweghachite Rate 95% 98% 98% 98%
Arụ ọrụ Usoro Of Placer Gold Washingsa Plant
Mgbe emechara nkeji osisi niile. Na-ejikarị excavator ma ọ bụ payloader na-eri nri osimiri osimiri n'ime hopper, mgbe ahụ ájá na-aga trommel ihuenyo. Mgbe ihuenyo trommel na-agbanwe agbanwe, nnukwu ihe karịrị 8mm ájá ga-enyocha, obere obere ihe na-erughị 8mm ga-aga na ntanetị nke ọla edo ma ọ bụ ihe na-eme ka ọla edo na-emegharị (na-atụkarị aro ka onye na-atụgharị uche, n'ihi na ọ nwere ike nweta oke mgbake dị iche iche gold urughuru nha si 40 ntupu na 200 ntupu). Gbaso concentrator bụ gold sluice na gold blanket, nke a na-eji na-agbake ndị fọdụrụ gold ke concentrator.
Onye na-etinye ego ọla edo
Gold centrifugal concentrator bụ iji ike ndọda centrifugal ike ịnakọta ọlaedo uche na osimiri ájá ma ọ bụ ala, ọ kwesịrị ekwesị na-anakọta gold ntupu size si 200 ntupu 40 ntupu, ọnụego mgbake maka free gold ahụ nwere ike iru elu 90 %, ọ bụ onye ọlụlụ zuru oke na-arụ ọrụ na ntanetị ọla edo trommel.
Mkpụrụ ọla edo na blanket
Mgbe anakọta gold uche fromo na centrifugal concentrator na gold sluice blanket, ndị kasị ụzọ bụ mgbe ahụ na-etinye ya na n'ikwe table iji meziwanye ọkwa edo.
Mercury Amalgamation Barrel Ma ọ bụ Obere Ball Mill
A ga-etinye ihe ọla edo ndị anakọtara site na tebụl na-eme mkpatụ n'ime obere igwe blọl, ma ọ bụ anyị na-akpọ itmercury amalgamation gbọmgbọm. Mgbe ahụ, ọ nwere ike ijikọta ya na mercury ma mepụta ngwakọta ọla edo na mercury.
Ọkụ eletrik na-agbaze Ọkụ
Mgbe inwetara ngwakọta nke ọla edo na mercury, ịnwere ike itinye ya n'ime ọkụ ọkụ na-agbaze ọla edo ma kpoo ya ọkụ, mgbe ahụ ị ga-enweta mmanya ọla edo dị ọcha.
Mercury distiller separator bụ ngwaọrụ nke na-ekewapụrụ Mercury na ọla edo. A na-eji Mine Gold Mercury Distiller mee ihe na obere osisi na-egwupụta ọla edo maka evaporation nke Hg site na Hg + ngwakọta ọlaedo, ma na-edozi ọla edo dị ọcha. N'ihi okpomọkụ nke ikuku gas dị n'okpuru ebe mgbaze na ebe esi esi ọla edo. Anyị na-ejikarị usoro distillation ekewapụ ọla edo na amalgam mercury.
Nke gara aga: Mining Rock ore egweri Ball Mill Powder egweri Machine
Osote: Ezigbo Na Ezé Type Double Roller Crusher
Gold Black Sand Plasa Osisi
Gold Concentrator Gold Saa Osisi
Osisi Gold Gravity
Osisi Trommel na-asacha ọla edo
Obere Gold Saa Osisi
Mining Ore Wet Pan Mill Gold Gravity Nkewa ...
Alluvial Placer Gold Washingsa Plant centta ...